Milan, isi obodo ejiji (Ia) | Akụkọ Njem
Carlos Lopez | | General, Italia, Milan
Anyị na-aga njem anyị ma anyị ga-anọ na Europe, oge a ka anyị ga-eleta otu n'ime obodo Itali ndị kacha mma, nke a maara dị kaisi ejiji”Bụ otu n'ime obodo ndị kachasị nwee ụwa niile nke Italytali nwere. Anyị na-aga Milan! Na nke mbụ a, na dị ka ọ dị na mbụ, anyị ga-amụtakwu banyere akụkọ ihe mere eme nke njedebe ma si otú a nwee echiche dị iche nke ihe niile mgbe anyị zutere n'akụkụ ikpeazụ nke nleta anyị.
Obodo a dị n’ụzọ dị mma n’ọnụ ụzọ ámá Italiantali. Milan na Lombardy mpaghara abụwo okwu nke ọgụ na-enweghị njedebe ruo ọtụtụ narị afọ na narị afọ. Ndị dị ka Celts, ndị Rom, ndị Goths, Lombards, ndị Spain na ndị nwe obodo Ọstrịa agafeela, na-achịkwa obodo ahụ n'oge ụfọdụ nke akụkọ ntolite ya ma mee ka ọ baa ụba na ọdịnala na akụkụ ndị ọzọ.
Map nke Lombardy ugbu a
Isi obodo malitere na 400 BC mgbe ndị Gauls biri na mpaghara a wee merie ndị Etruria megide ndị Celts bụ ndị na-achọ ibuso obodo ahụ agha. N’afọ 222 Tupu Oge Ndị Kraịst, ndị Rom meriri obodo ahụ ma tinye ya n’Alaeze Ukwu Rom n’aha Udochukwu na 89 BC ọ ghọrọ ebe obibi Latin na-adịgide adịgide mgbe ụfọdụ nwara nnupụ-isi.
N'ihe dị ka 42 BC, Rome ghọtara obodo ahụ dị ka akụkụ nke ókèala Italiantali na 15 BC tupu eze ukwu Augustus mere Milan isi obodo mpaghara Transpadania, gụnyere obodo Como, Bergamo, Pavia, Lodi na Turin ọzọ.
N'ihi ọnọdụ ọnọdụ obodo ahụ (n'agbata peninshula Italiantali na ebe ndị ọzọ gafere Alps ebe ndị Rom chọrọ ịgbatị ọdịmma ha) aha ya gbanwere na Rome nke Abụọ ma site na AD 292, obodo ahụ ghọrọ isi obodo nke Alaeze Ukwu West.
Usoro map oge oftali
Mgbe 313 AD gasịrị, e wuru ọtụtụ ụka ma chie bishọp mbụ echichi, onye nwere mmetụta dị ukwuu aha ya bụ Ambrose (Ambroglio) onye mechara bụrụ onye na-elekọta Milan (Sant'Ambroglio) n'agbanyeghị na obodo ahụ na-efunahụ n'obodo Rome dị mkpa
Anyị abịa na njedebe nke akụkụ mbụ a raara nye akụkọ ihe mere eme. Na ntinye ndị sochirinụ, anyị ga-eji nwayọ mụta banyere mmepe obodo site n'oge gara aga rue ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Italia » Milan, isi obodo ejiji (Ia)
Airlinesgbọ elu kacha mma na Asia